လမင်းခင်: မတူရင်မတုနဲ့(၁၀)နှစ်
Posted by LRDP at 9:31 AM
I also want to say him the same words u wrote. so stupid man...
He named himself DR L S... what kind of DR is he?...L S is L S. stupid Dr.Brainless, shameless.
ကောင်းတယ် အမ အဲဒီကောင်ကို ဒီထက်တောင် ဆော်သင့်သေးတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရှောင်ထွက်သွားသူဟာ မိတ်ဆွေစစ် မဟုတ်သလို တကယ့် တိုက်ပွဲ ကာလမှာ ကြုံကြိုက်ရက်နှင့် ၀င်မပါခဲ့တဲ့ လွဏ်းဆွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အကြောင်းသိသူတိုင်း သဘောပေါက်မှာပါ။ ခု ကိစ္စ အမ လုံးဝ မှန်တယ်။
Dear Khin you are right. This bastard is crooked and he is reallyamole. As the father ofapolitical prisoner, I feel like he sentaclandestine message to Junta, not to release 88 students because they are very peril.